Imigaqo yeMpilo kuBantu abaDala - iBhanki yokutya yaseGalveston County
admin Agasti 26, 2019 0 Comment Imfundo yezondlo
Sijolise kakhulu kwezempilo yabantwana kodwa akusoloko kukho intetho eyoneleyo ejikeleze impilo yabadala. Esi sihloko sibaluleke njengezempilo zabantwana. Ngokufanelekileyo sifuna ukugxila kwezempilo kuwo onke amaxesha obomi bethu kodwa abona bantu basesichengeni sokungondleki ngabantwana kunye nabantu abadala. Isizathu soko, ayingabo bonke abantu abadala abangenandlela yokupheka okanye iindlela zemali zokuxhasa uhlahlo-lwabiwo mali olubandakanya ukutya okutsha. Ukugxila kwezempilo kubantu abadala kubalulekile ukuba bakwazi ukonwabela ubomi njengaye nawuphi na umntu ngaphandle kokutshintsha kwesondlo okwenzeka ngokuguga.
Abantu abadala abadala baxhomekeke kukutya okukhawulezayo okanye bakhuphe kuba batshisiwe ekuphekeni okanye abanokuhlala kwenye indawo nekhitshi elipheleleyo. Oku kunokuba yingozi kwimpilo yabadala. Emva kwexesha ebomini imizimba yethu ikhula nemiba kunye nezifo, ezinye zazo zondla kwizigcinakalisi, zongezwe isodiyam, kunye neswekile. Uhlobo lwesibini lweswekile, iCholesterol ephezulu, uxinzelelo lwegazi oluphezulu zizinto zonke eziqhelekileyo phakathi kwezizukulwana ezindala kwaye yonke le micimbi iba mandundu kukutya okwenziwe ikakhulu kukutya okukhawulezayo okanye ukukhutshwa. Kungenxa yoko le nto ukutya okunempilo kubaluleke kakhulu ukuze uzive kamnandi yonke imihla.
Njengommi omkhulu yeyona nto ibalulekileyo kwimpilo yakho yokutya ukutya okutsha nokunempilo. Indlela otya ngayo kufuneka ibe neeproteni ezininzi, iziqhamo kunye nemifuno. Kumnandi ukutya izinto ezinamathanga; ityhuna, isalmon, iziqhamo, okanye imifuno, jonga nje iilebheli zezithako zezithako ezongeziweyo ezinje ngeswekile okanye isodiyam, kwaye uphephe ezo mveliso. Kwakhona khumbula ukujonga izinto zobisi ezinamafutha asezantsi endaweni yobisi olupheleleyo olunamafutha. Jonga izinto ezinqatyisiweyo ngevithamini D ukufumana amajoni omzimba omeleleyo, ikhalsiyam ukomelela kwethambo, kunye nefayibha yokugcina inkqubo yakho yokwetyisa isempilweni.
Ukuhlala u-hydrated, njengomntu omdala okhulileyo kubaluleke kakhulu. Ukufumana amanzi emzimbeni kunokuba yingozi kwimpilo yakho. Amanzi sesona siselo sinika amanzi kodwa iti okanye ikofu kunokuba yinto elungileyo ukuyitshintsha imini yonke.
Abantu abadala bahlala befumana amayeza, anokuchaphazela ukutya kwabo. Oku kunokubangela isisu esibuhlungu kukutya okuninzi okanye nokungabinamdla wokutya, onokubangela ukungondleki. Izifo ezininzi zikwabangela ukuphazamiseka kubantu abadala abanomdla. Qiniseka ukuba utya ukutya okuncinci okusempilweni imini yonke ukunqanda eminye imicimbi ngempilo yakho.
Njengommi omkhulu ophila ngokhuseleko loluntu kuphela, unokufumana kunzima ukuba ufumane ukutya okwaneleyo ukuze ufumane inyanga yonke. Nceda ufumane izixhobo zokukunceda ufumane isondlo esifanelekileyo ukuze uhlale usempilweni. Fikelela kwibhanki yakho yokutya yendawo, banokubonelela ngokutya ukukunceda ukongeza ukutya kwakho kwaye uninzi lunenkqubo ephezulu enikezelwe ekuqinisekiseni ukuba abantu abadala bafumana ukutya okwaneleyo. Jonga nezibonelelo zeSNAP. Uninzi lwabantu abadala banokufumana isixa esikhulu ngenyanga xa kufanelekile.
Ibhanki yokutya yaseGalveston County ineNkqubo yeKhaya engqongqo ngokungqongqo kubantu abadala abaneminyaka engaphezulu kwama-65 (kunye nabakhubazekileyo). Ukuba uziva ukulungele okanye wazi umntu onokuthi, nceda ufikelele kwibhanki yokutya ngefowuni okanye undwendwele iwebhusayithi yethu ngolwazi oluthe kratya malunga nendlela yokufaka isicelo sale nkqubo.
egqithileyo ngeposi Previous: Isikhokelo seMpilo yaBantwana
Okulandelayo elilandelayo: Yintoni “ukutya okuHleliweyo”?